MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA DHEXDHEXAAD POODLE - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Dhexdhexaad Poodle
Zari, madow Klein Poodle (Moyen Poodle), sawir qadarin leh Te-Awa Poodles
'Dhexdhexaad' hadda waa ereyga inta badan loo isticmaalo 'cabbirka Klein' ama 'Moyen'. Moyen macnaheedu waa dhexdhexaad Faransiis. Klein macnaheedu waa mid yar ama mid yar oo Jarmal ah. Ereyga Klein waxaa loo adeegsadaa Jarmalka oo keliya. Moyen waa eray faransiis ah oo ay adeegsadaan oo ay hada isticmaalaan FCI Fanciers, laakiin waagii hore Moyen waxaa isticmaali jiray FCI sanadihii lasoo dhaafay. Taranka Poodle waxaa loo yaqaan Caniche oo Faransiis ah. Faransiisku waa waddankii loo yaqaan 'Poodle breeds' ee FCI (The Fédération Cynologique International, ururka hareeraha adduunka ee 94 dal). Noocyada 'Poodle' waxaa badanaa loogu gudbiyaa luuqadda Faransiiska ee diiwaangelinta FCI iyo bandhigyada. Cabbirkaan dhexdhexaadka ah wuxuu u dhexeeyaa Guntinta yar iyo kan caadiga ah, laakiin laguma helo isga gudubka labadooda waa mid afaraad oo dhab ah oo nooca Poodle ee Yurub ah mana ahan cabir cusub. Baaskiilkan dhexdhexaadka ah waa mid aad ugu badan Mareykanka, laakiin maadaama ay yar yihiin, waxaa guud ahaan la dhigaa guryaha xayawaanka, maadaama aysan si guul leh ugu tartami karin giraanta AKC ee ka dhanka ah dhiggooda weyn, Standard. Si kastaba ha noqotee, way ku tartami karaan goobta isku xirka UKC qaar badanna waa horyaallo. Dhex-dhexaadyadu waxay u muuqdaan inay ku jiraan 15-20 inji inji, cabbirka Poodle-ka yar. Halkan dhex-dhexaadyada Mareykanka waxaa lagu muujiyey Fasalka Ciyaaraha ee aan Ciyaaraha ahayn. Giraanta UKC, waxay ku muujinayaan Kooxda Gun Eyga.
Marka loo hagaajiyo si loo muujiyo heerarka eeyga jirka waxaa loola jeedaa inuu bixiyo muuqaal muuqaal ah. Waxay leedahay qiyaastii dherer la mid ah dhererka meesha engegay. Qalfoofka waxaa si dhexdhexaad ah loogu soo koobay joogso yar laakiin sugan. Waxay leedahay gun dheer, oo toosan. Indhaha mugdiga ah, ee u eg oval-ka ayaa xoogaa kala fog oo waa madow ama bunni. Dheguhu waxay u sudhan yihiin meel u dhow madaxa wayna dheer yihiin oo fidsan yihiin. Labada lugood ee hore iyo gadaalba waxay u dhigmayaan cabirka eeyga. Khadka sare waa heer. Dabada ayaa la dhigay oo kor loo qaaday. Mararka qaarkood waxaa lagu xiraa kala bar dhererkiisa ama ka yar si eygu u ekaado mid dheellitiran. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro Cagaha u eg-oval-ka way yaryihiin oo suulasha ayaa qalooca. Koodhku waa mid duuban ama xadhig leh. Waxay ku jirtaa dhammaan midabada adag oo ay ku jiraan madow, buluug, qalin, cawl, kareem, abrikot, casaan, caddaan, bunni ama kafe-au-lait. In kasta oo aysan sameynin heerka bandhigga qoran, kuwa wax soo saara qaarkood ayaa tarma Poodles midabbo kala duwan leh. U fiirso qurxinta noocyada kala duwan ee Poodle clips.
SUNTZU shih madow isku darka yorkie
Dhexdhexaadku waa eeyaha wehelka ah ee caqliga badan. Waa loo tababbaran karaa heer sare, waana mid aad u diyaarsan oo ku faraxsan inuu ka farxiyo shaqaalihiisa. Muuqaal iyo xariifnimo, waxaa badanaa loo isticmaalaa sida eeyga circus. Hadba inta eey caqli badan tahay, ayey u sii baahan tahay maskaxdiisu inay mashquuliso. Noocani kuma noolaan karo banaanka qol. Waxay ubaahantahay inay kamid ahaato qoyska. Waxay noqon kartaa heer sare ah haddii aan la siinin nooca iyo xaddiga jimicsiga . Ha u oggolaan eeygan inuu horumariyo Cudurka Dog yar , Halka eyga loo horseedo inuu rumaysan yahay inuu alfa ku yahay aadanaha. Waxay ku keeni kartaa eyga inuu noqdo xasaasi ah oo cabsi leh , oo aan aad loogu aamini karin carruurta iyo suurtagalnimada shisheeyaha, oo ay weheliyaan arrimo kale oo badan oo dabeecad ah. Bulsho eygaaga sifiican. Tani waa ilaalin aad u wanaagsan oo ku saabsan cabbirkeeda, marar dhif ah ayey noqoneysaa mid dagaal badan. Dhex-dhexaadyaashu waxay bilaabi karaan inay wax badan cabaan iyagoo aan sax ahayn bini'aadamka ilaa isgaarsiinta canine , xeerar la raaco iyo xaddidaadda waxa loo oggol yahay inay sameeyaan. Poodles waa saaxiibtinimo eeyaha kale iyo xayawaanka aan xayawaanka ahayn . Hubso inaad tahay shirkada eygan hogaamiyaha xirmada , si looga fogaado wixii aan la rabin dhibaatooyinka dhaqanka .
Waxay kudhacdaa inta udhaxeysa Guntinta iyo Cabbirka Caadiga ah. Ma ahan kala duwanaanshaha cabbirka AKC rasmiga ah, hase yeeshe wuxuu caan ka noqday meel ka baxsan Mareykanka.
Dhererka: 15 - 20 inji (38 - 50 cm)
Miisaanka: 20 - 30 rodol (9 - 13 kg)
Nooc cimri dheer, Poodles waa, si kastaba ha noqotee, waxay ku xiran tahay cuduro badan oo hidde ah. Indho-beelka indhaha iyo soo noqoshada aragga ee soo noqnoqda waxay sababi kartaa indho la'aan. Xasaasiyadaha iyo xaaladaha maqaarku waa wax caadi ah - oo laga yaabo inay sabab u tahay adeegsiga xirfada yar ee loo yaqaan 'clippers' ama xasaasiyadaha shaambo iyo / ama midab xoojinta Indhaha oo qulqulaya iyo infekshannada dhegaha ayaa iyana caan ah. Waxay sidoo kale u nugul yihiin PRA, sonkorow, suuxdin iyo wadno xanuun. Poodles Brown waxay u muuqdaan inay noqdaan kuwo cirro ah oo aan qaan gaadhin. Sidoo kale IMHA (Dhiig-baxa Dhiig-baxa Hemolytic).
Poodle-ka Dhexdhexaadku wuxuu ku fiican yahay nolosha guryaha. Markaad siiso jimicsi kugu filan, ma aha wax firfircoon gudaha. Way jiifsan doontaa adiga agtaada waana daganaan badan tahay gudaha gudaha, in kasta oo ay jeceshahay in lagu ciyaaro banaanka waana nooc caqli badan, sidaa darteed waxay jeceshahay waxqabadyo badan oo feker leh si loo kiciyo maskaxdiisa. Noocani wuxuu sameyn doonaa okay la'aan deyr.
Poodles Dhexdhexaad u baahan a socod maalinle ah . Intaad socodka ku jirto hubso in eey ciribta ka xigto ama ka dambeyso qofka hogaanka haya, marna hore, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasna wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Sida noocyada oo dhan, ciyaaruhu ma buuxin doonaan dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan oo ka baxsan aagga furan ee ka baxsan hoggaanka, sida barxad weyn oo ood leh. Waxay jecel yihiin biyaha iyo kal-fadhiyada jacaylka ee ciyaarta. Iyagu waa nooc aad u fara badan oo leh ugaarsi iyo dib u soo helid bilow, inkasta oo ay ku fiicnaadaan dhacdo kasta oo waxqabad ah oo aad siiso: firfircoonaan, adeecid, isu soo bax, muujin muujin, iyo inta badan mid ayaa ka tagaya hal giraan oo si toos ah ugu taga mid kale si uu mar kale u tartamo. Maaddaama ay jecel yihiin biyaha waa eyda quusitaanka weyn waxayna jecel yihiin soo-celinta biyaha.
Qiyaastii 3 ilaa 4 eey
Poodles waa in si joogto ah loo maydhaa oo la xajiyaa lix ilaa sideed toddobaad kasta. Nadiifi oo ka hubi dhegaha si joogto ah wax ama caarada ama caabuqa oo soo bixi timaha ka soo baxa gudaha kanaalka dhegta. Ilkaha waxay u baahan yihiin miisaan balaaran. Maadaama uusan jaakadu daadin waxay u baahan tahay in la jarjaro. Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo loo yaqaan 'clips poodle'. Kuwa ugu badan ee milkiileyaasha xayawaanku leeyihiin waa clip-daryeel fudud oo loo yaqaan 'xayawaanka xayawaanka,' 'puppy clip' ama 'clip clip', halkaas oo jaakaddu ka gaabin jirka oo dhan. Muuqaaladda caanka ah ee lagu soo bandhigayo waa sadarka Ingiriisiga iyo qaybta Qaaradaha, halkaasoo qeybta dambe ee jirka la xiirto, jijimooyin looga tago hareeraha anqawyada, iyo pom-poms ayaa looga tagaa dabo iyo miskaha. Heerka AKC wuxuu u oggol yahay eey ka yar hal sano in lagu muujiyo muusig yar oo yar yar oo loo yaqaan 'puppy clip' kaasoo leh shuruudo gaar ah sida foorarsiga dhamaadka dabada. Noocyada kale ee koodhka ah ayaa ah koodhka qaaradda ee la beddelay, magaalada iyo waddankiisa, xayndaabka ama kaydka adeegga, kaydka xagaaga, iyo Miami ee bikini clip. Poodles wax yar ayey daadiyaan timo la'aan waxayna kufiicanyihiin kuwa xasaasiyadda qaba .
Poodle-ka waxaa laga yaqaanay Galbeedka Yurub oo dhan ugu yaraan 400 oo sano waxaana lagu xardhay sawirro qarnigii 15-aad iyo bas-qaboojiyayaal laga soo bilaabo qarnigii koowaad. Mawduuca waa mid lagu muransan yahay halka eey si rasmi ah loogu horumariyey oo cidina run ahaantii ma oga dhalashada asalka ah ee asalka ah. Faransiiska ayaa qaatay sheegashada asalka, laakiin AKC ayaa sharaf siinaya Jarmalka, halkaas oo ay yiraahdeen waxaa loo adeegsaday eey biyo ka soo saara. Sheegashooyinka kale waxay ahaayeen Danmark, ama Piedmont-kii hore. Waxa hubaal ah in eeygu ka farcamay imminka bakhtiyey Eyga Biyaha ee Faransiiska, Barbet iyo suurtagal ahaan Hungary Water Hound. Magaca 'Poodle' waxay u badan tahay inuu ka soo baxay ereyga Jarmalka 'Pudel,' oo macnaheedu yahay 'mid ku ciyaara biyaha.' Muuqaalka 'Poodle clip' ayaa waxaa loogu talagalay ugaarsadayaasha si ay eeyaha uga caawiyaan inay si hufan u dabaashaan. Waxay timaha uga tagi lahaayeen laabatooyinka isgoysyada si ay uga ilaaliyaan qabow daran iyo cawsduur fiiqan. Ugaarsadayaasha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa u isticmaalay Poodle sida eey qori ah iyo dib u habeyn haad biyood iyo urinta shixnadaha waaweyn ee jiifa dhulka hoostiisa. Faransiisku wuxuu bilaabay inuu u adeegsado jilitaanka inuu noqdo jilaa circus sababtoo ah eeyga sirdoonka sare iyo tababbarka. Noocani wuxuu caan ku noqday Faransiiska, taas oo keentay magaca caanka ah ee 'French Poodle,' laakiin dadka Faransiiska dhab ahaan waxay ugu yeeraan 'Caniche,' oo macnaheedu yahay 'eyga duck.' The Ciyaaraha iyo Poodle Guntin noocyo ayaa laga soo saaray eyda waaweyn, maanta loo yaqaan Poodles-ka caadiga ah . Qarnigii 18aad poodle yaryar ayaa caan ku noqday dadka boqortooyada. Saddexda cabbir ee rasmiga ah waa Toy, Miniature iyo Standard Poodle. Waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin hal nooc oo waxaa lagu xukumaa isla halbeeg qoran laakiin leh cabirro kaladuwan oo kala duwan. Bixiyeyaashu sidoo kale waxay tarmayaan cabbirka udhaxeeya ee loo yaqaan Dhexdhexaad Dhexdhexaad ah, mararka qaarkoodna loo yaqaan Klein Poodle (Moyen Poodle) iyo mid yar teacup Poodle . Qaar ka mid ah hibooyinka Poodle-ka waxaa ka mid ah: dib u soo ceshan, firfircoonaan, ilaalin, adeecid tartan iyo qabashada tabaha.
Beethoven, Madoow Klein Poodle (Moyen Poodle), sawir xushmad leh Te-Awa Poodles
Casey Dixon, Madoow Klein Poodle (Moyen Poodle), waxaa leh sharraxad Te-Awa Poodles
Mia, oo cad oo Klein Poodle ah (Moyen Poodle), waxaa iska leh sawirka Te-Awa Poodles
isku darka poodle toy lhasa apso
Moyen Poodle eey yar oo midabkeedu midabkiisu yahay, xushmad leh Sawirrada eeyaha Summit
Midab-midab leh oo loo yaqaan 'Klein Poodle puppy', sawir qadarin leh eeyaha Summit Mountain
Xiver Klein Poodle. Wuxuu u dhexeeyaa cabir yar iyo mid caadi ah.
Rasmiga AKC Aqoonsiga Poodles
sawirada isbaanishka guga ingiriiska
Noocyada aan ahayn - AKC Poodle
Eeyaha Poodle - Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
turkiga cad lab ama dhadig
waa maxay eegno eey Chow sida
Intee ayuu le'eg yahay Terrier rat
eeyaha ku bilaabma z
xuubka yar yar ee gorgorka iibka ah